Ati dura Oromoo moo itophiyaa dhaa? Gaaffii juujuu akkamiiti? – Gubirmans Publishing
Oromiyaan waggoota dhibbaa oliif qabaa Itophiyaa humnaan itt fe’ame jala jirti. Kanaaf sabaawoti Oromoo waan hariiroo sabgidduu ilaalutt kelladarbii (passport) nambiyyummaa see qabatanii deemu. Oromoma keessaa illee mammiin Oromoon saba of danda’e ta’uu kan keessaa hin baane jiru. Jireenyi saanii daddaaqinaa fi dudhama dhabuutu keessa guute. Alii republika Oromiyaa walaba dhaabuuf kan kutatan waliin joga’u. Alii walqixxummaan nambiyyummaan Itophiyaa nu hayyamamnaan nu gaha jedhu. Eessa akka isaan ijaajjan baruun hammuma eessa akka isaan hin ijaajjinee baruu dhibaa dha. Sun tuffii nyaaphaf karaa bane. Hobbaati kolonummaa bara dheeraa fi hanqina birmadumma sammuutu haala akkasii uuma. Nyaaphi jara akkasii ilaaluun gargar baasee rukutuuf anjaa kan argate itt fakkaata. Mamtuun ati dura Oromoo moo Itophiyaa dha yoo jedhaman isa lammaffaatu afanitt dhufaa. Jarri akkasii jara Amerkanoti “Uncle Tom”, yk Oromoon “Galtuu” jedhaniini. Jara akkasitt kan baratantu Oromo argan hunda gaaffii tuffii “ati dura mali?” jedhu kan gaafatan. Oromo an dura Oromoo dha jedhanii fi an dura Itophiyaa dha jedhaniitt hiranii waldura dhaabbachiisuu tattaafatu. Gidduu darbe mooraa Habashaa fi Oromo keessatt waca kan kaase gaaffi ati dura Itophiyaa moo Oromoo dha jedhuuf deebii kenname ture. Oromtichi “An dura Oromoo dha” jechuu saatiif mooraa Habashaatii haddheessaa fi arrabsoon itt robe agarreerra. Sana irratt sabboonaan Oromoo biraa yaada ofii ifsatee ture. Biyyi inni keessa jiru mirgi of ifsuu heeraan kan eegame. Habashooti ala jiran “mirga ilmoo namaatu Wayyaaneen tuqame, abalu faatu maaf of ifsitan jedhamanii hidhaman” jechuun Mootummaa Itophiyaa amma angoo irra jiru balaaleffataa, hiriira itt bahaa oolu.
Yero isaanitt dhufu garuu biyya olhantummaaan seeraa jiru hamaa jalaa itt baqatan kana keessatt Oromoon maaf xiixa jechuun burququ. Si’ana burquqquun hin dhiifnee Oromticha yaada ifsate jenne butanii gorra’uuf yoo aggaman nammi itt baanaan dhiisanii baqachuu dhageenye. Oromoon alaaba ofii balalisuu erga jalqabanii fi qasaawoti ifatt nuti Itophiyaa miti jedhanii erga labsanii kurnan lama darbaniiru. Gurguddoon Habashaa haala wareegama Ilmaan Oromoo kumaa fi kitilaan uumame kana utuma arganii haaluu yaalu. Gubbaatt Oromoon eenyummaa ofii maman akka jiran himuu yaallee jira. Jara fuula itt agarsiisan akkasii irraa ka’anii Oromoo hundi kaayyoo walabummaa akka hin utubnett fudhatani. “An dura Oromoo dha” jechuunuu akka waan raajiitt itt dhagahame. Sanan akaakuun tuffii nyaaphaa bara abbaa lafaa kulkulfataa jirachuu hubanna. Ija laafuu fi harka kennachuun bakkatt hin deebisu. Gaaffiin “Ati dura Oromoo dhaa?” jedhu ofirrummaa fi wa’ee Oromo irratt beekumsa dhabina iyyaafatichi qabu beekama agarsiisa.